5 Natdị Agaghị echefu echefu Na Europe | Save A Train
Home > Train Travel Switzerland > 5 Natdị Agaghị echefu echefu Na Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/10/2020)
Ugwu dị egwu dị egwu, ndagwurugwu ndagwurugwu, nsụda mmiri, ọdọ mmiri, na anụ ọhịa dịgasị iche iche, Ulo Europe kachasi echefu echefu uwa nile. Na-emefu ego gafee ala ahịhịa ndụ juru na oge opupu ihe ubi, 5 nke kacha mma mara mma mee na Europe na-echebe ogige ntụrụndụ mba na-anabata ndị njem si n'akụkụ nile nke ụwa. Y’oburu n’acho ka ije ije, ije, ma ọ bụ na-ekpori ndụ ihe nsọ, mgbe ahụ ị ga-ahụ nke anyị n'anya 5 ọdịdị kacha echefu echefu echekwara na Europe.
1. Belluno Dolomite Nature Reserve Na Italytali
Belluno Nature Reserve e hiwere na 1990 ichebe oke ohia nke ndi Dolomit. Emi odude ke edem Dolomite ke ugwu Italy, Ogige ntụrụndụ Belluno na-adọrọ mmasị n'oge opupu ihe ubi. Ugwu ndị na-acha akwụkwọ ndụ na ugwu ndị mara mma kpuchiri ya na akwa ifuru. N'agbanyeghị ogo ahụike gị, ị ga-enwe ezigbo ọ exploụ ịgagharị ebe a, ebe ọ bụ na e nwere ụzọ dị iche iche. Belluno Reserve Reserve na Europe zuru oke maka ma ndị mbido ma ndị njem nwere ọfụma.
32000 hectare nke obere osisi na limestone, eke Reserve Belluno gbaturu site na ndagwurugwu Cismon rue ndagwurugwu Piave. Di na nwunye nwere ọtụtụ ọdịbendị na ọdịnala n'ihi ọtụtụ obodo na mpaghara ndagwurugwu Piave. N'ihi ya, mgbe ị gara ileta ihe okike Belluno na Europe, ị ga-enweta ohere ịnweta njem ngagharị dị egwu nke oke ebube na ọdịnala ọdịnala.
Etu ị ga - esi nweta Reserve Reserve Belluno?
Belluno Reserve Reserve erughị 3 ụgbọ oloko ọtụtụ awa si Venice.
Ebee ka m nwere ike ịnọ gburugburu Belluno Park?
E nwere ọtụtụ ụlọ akịrịka ugwu, B&B, na ụlọ nkwari akụ.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịnọ na Belluno Nature Reserve?
Belluno Dolomites idobere bụ otu n'ime ndị kasị ibu na 5 ọdịdị a na-agaghị echefu echefu echekwara na Europe. Ọzọkwa, Belluno bụ ogige mara mma mara mma, yabụ na ị ga-emefu opekempe 3 ụbọchị na-agagharị ma na-anụ ụtọ lagoons, ugwu, na eke mara mma.
2. Hohe Tauern Nature Reserve Na Ọstrịa
Ebe a na-edobe osisi eke na Europe kasị ukwuu dị na Austria. Hohe Tauern idobere ulo 10,000 umu anumanu, 1,800 osisi, na Grossglockner, Kasị elu nke Austria, na 4,798 mita n'elu oké osimiri dị. Nke a pụtara ìhè elu bi n'etiti 200 elu ndị ọzọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ fauna, ugwu ọdọ mmiri, na olulu mmiri.
Ndagwurugwu Hohe Tauern nke ala na-ejupụta na glaciers mara mma, mgbe ochie na sinik obodo echiche, kapeeti okooko osisi, na oke ohia. Ogige a nke Europe bụ ebe nsọ nye ndị ọbịa ya na ndị bi na gburugburu ya. Ọ kachasị, Umbalfalle Nature Trail nke mmiri na osimiri, ebe ị ga-ahụ ụfọdụ n'ime waterfalls kasị dị ịtụnanya na Europe.
Uzo esi aga na Hohe Tauern Nature Reserve?
Ebe nchekwa ugwu Hohe Tauern dị nso na obodo Mallnitz. Vienna na Hohe Tauern site na ụgbọ oloko bụ ihe 5 awa.
Ebee ka m nwere ike ịnọ gburugburu Hohe Tauern Park?
Mallnitz bụ obodo ama ama na Hohe Tauern nke nwere ọtụtụ ebe obibi.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịnọ na Hohe Tauern?
Enwere ọtụtụ dị iche iche ụzọ njem njem na Hohe Tauern ihe ndozi, ya mere na-ezube a 4-5 njem ụbọchị kachasị mma. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịchọpụta ogige ahụ na obodo dị nso.
3. Ecrins Nature Reserve Na France
Ka ị na-arịgo n'okporo ụzọ a dị ịtụnanya na French Alps, kpachara anya maka ugo, oche, willow grouse, na ọtụtụ anụ ọhịa ndị ọzọ na-akpọ ya ụlọ. Ebe a mara mma na European Alps bụ otu n'ime ihe mara mma ogige mba ị ga-enwe ohere ịchọpụta.
Glaciers, ugwu di elu, ala alpine na-acha akwụkwọ ndụ, na ikuku ohuru, Ecrins ’mma na odida obodo ga-ejide mkpụrụ obi gị.
Uzo esi aga na Ecrins Nature Reserve?
Nwere ike iru Ecrins mba ogige ọ bụla na France. Ebe nchekwa okike dị n'akụkụ oke France na Italy. Ọ dị nso na Lyon, Marseilles, na Geneva na Switzerland, otú ụgbọ okporo ígwè njem gafee France na Ecrins bụ oké nhọrọ.
Ebee ka m nwere ike ịnọ gburugburu Ecrins Park?
Site na họtelu ndi enyi na enyi gaa ezumike ezumike, enwere otutu ebe obibi di iche-iche gburugburu ebe okike Ecrins.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịnọ na Ecrins?
Ọ dịzịrị gị. Ma ị kpebiri ịrara maka 7 ụbọchị ma ọ bụ gaa maka ezumike izu ụka, ị ga-enwe ezigbo nrọ nrọ.
4. Saxon Germany Na Bohemian Switzerland Nature Reserve Na Czech Republic
Mardị okike magburu onwe ya nke Saxon Switzerland na-esi na Germany ruo Czech Republic. Elbe limestone ugwu na ugwu Pravcicka brana a ma ama nke uwa egosiputarala “Odum, amoosu, na Wardrobe ”nkiri. Ebe nchekwa a na - adọrọ adọrọ bụ otu n'ime ihe okike a na - agaghị echefu echefu na Europe nwere ọtụtụ echiche enyi na enyi nke Instagram na elu kaniyon.
N'oge ọkọchị ma ọ bụ n'oge oyi, ụzọ ndụ akwụkwọ ndụ, na ụzọ ụkwụ na-akara ọma ma dị mfe ịmata ọdịiche dị na ahịhịa ndụ ndụ n'akụkụ abụọ nke kaniyon na osimiri. Saxon Germany, ma ọ bụ Switzerland Bohemian, dabere na njem izizi gị ma ọ bụ njedebe ikpeazụ gị, nke bụ ihe magburu onwe oasis na hiking paradise maka njem si gburugburu ụwa.
Uzo esi aga Saxon Germany Ma obu Bohemian Switzerland Nature Reserves?
Nwere ike ị nweta ebe nchekwa a dị ịtụnanya Europe site na njem ụbọchị site na Prague ma ọ bụ Dresden.
Ebee ka m nwere ike ịnọ gburugburu ogige ntụrụndụ mba ahụ?
Ebe ọ bụ na ndagwurugwu okike dị na oke ala Germany na Czech Republic, nhọrọ nnabata enweghi ngwụcha.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịnọ na Bohemian Switzerland?
A ụbọchị-njem bụ onye zuru kwesịrị, ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ụbọchị ole na ole, mgbe ahụ ọ na-atụ aro ya nke ukwuu.
5. Ordesa na Monte Perdido Nature Reserve Na France
Ọ dị n'etiti n'etiti Spain na France, Ordesa na Mount Perdido bụ otu n’ime ihe ịtụnanya dị ịtụnanya na Europe. Ọ bụ ezie na emi odude ke French n'akụkụ na a elu ugwu nke 3,355 m. ugwu ugwu Monte Perdido natara aha ya n'ihi na anaghị ahụ ya site n'akụkụ France nke oke.
Spectacular Ordesa bụ ma a Ebe UNESCO World Heritage dị na Europe na ebe obibi ndu nke anumanu na anumanu. Ọ bụ ebe obibi ndagwurugwu Ordesa, nsụda mmiri, iche iche ohia, tinyere ugo ọla edo, na 32 umu anumanu. Ka ị na-arịgo ma nwee mmasị na echiche nke ugwu Pyrenees, Gbaa mbọ hụ na ị lepụrụ anya maka Marmots, Ugbo, na ikwiikwii, dị ka nke ọma. Ya mere, Ebe nchekwa Ordesa na Monte Perdido bụ ebe nsọ dị ịtụnanya na njedebe na Europe maka ụdị njem ọ bụla.
site 3 awa ’ka 2 ụbọchị njem ije ụbọchị, Ordesa na-enye uzo di iche-iche, maka ọkwa dị iche iche.
Uzo esi aga na Ordesa Nature Reserve?
A na-enweta ego maka Ordesa na Monte Perdido site na France na Spain. Site na Zaragosa ruo Torla-Ordesa ọ bụ ihe 5 awa ma ọ bụ 3 awa si Barcelona. Ọ bụrụ na ị na-aga France, mgbe ahụ Toulouse dị 7 awa gafere.
Ebee ka m nwere ike ịnọ gburugburu ogige Ordesa?
Nwere ike ịchọta nnukwu ebe obibi dị na Torla, site na ụlọ ndị ọbịa na họtel.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịnọ na Ordesa Nature Reserve?
A na-akpọ Ordesa na Mount Perdido dị ka ogige Yosemite nke Europe. Ya mere, ị kwesịrị ịnọ ma ọ dịkarịa ala 3 ụbọchị, gụnyere njem ije na ezumike.
5 nke ụdị anụ a na-agaghị echefu echefu echebere na Europe na-enye echiche ngosipụta na ụzọ ụkwụ njem na mmiri iyi mmiri nke ụwa.. Ya mere, hiking n'ofe ndagwurugwu na-acha akwụkwọ ndụ, na-enwe mmasị n'ubi ifuru na ugwu elu bụ onyinye kasịnụ ị nwere ike inye onwe gị. Ọ dịghị ihe na-atọkwu ụtọ ma na-akpali akpali dị ka okike okike na mba ndị kachasị ịtụnanya na Europe.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka atụmatụ gị ezumike ka ọdịdị nke ị họọrọ ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “5 Ọtụtụ agaghị echefu echefu Nature Reserves Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-na…-reserves-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ja na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.